Mpamatsy varotra Rotary mpamatsy sy orinasa - mpamokatra rig fandavahana Rotary
Rig fandavahana rotary XR220D
Ny rig fandavahana rotary XR220D dia manana savaivony fandrefesana ambony indrindra 2000mm, haavon'ny fitrandrahana ambony indrindra 80m, tavy famoahana ambony indrindra 220kN · m, ary herin'ny maotera 242kW. Mampiasa fantsom-pitrandrahana fikorontanana sy fikorontanana mekanika izy io amin'ny fandavahana.
Rig fandavahana rotary XR280D
Ny rig fandavahana rotary XR280D dia manana savaivony fandrefesana ambony indrindra hatramin'ny 2500mm, ny haavon'ny fitrandrahana ambony indrindra 88m, tora-bidy avo lenta 280kN · m, ary herinaratra 298kW. Mampiasa fikororohana sy fanidiana fantsona fandavahana amin'ny fandavahana.
Rig fandavahana fihodinana XRS8 / 45
Rig ary atsofohy mihodina XRS8 / 45, ny savaivony famerenam-bidy indrindra dia mety hahatratra 4000mm, ny halavan'ny fitrandrahana ambony indrindra dia mety hahatratra 110m, ny herinaratra famoahana ambony indrindra dia 758kN · m, ary ny herin'ny motera dia 746KW.
XR150DⅢ rig ary atsofohy ny savaivony, ny savaivony famerenana ambony indrindra dia mety hahatratra 1500mm, ny haavon'ny fitrandrahana ambony indrindra dia mety hahatratra 55m, ny tavy famoahana ambony indrindra dia kN · m, ny herin'ny motera dia 133kW, ary mandray fantsom-panafody sy fantsom-borosy mihidy izy.
milina fandavahana hdd, Rig ary atsofohy amin'ny familiana, hdd rig, milina fandavahana lavaka,